IJamaica "iyenza ukuba ihambe" ngoTshintsho olutsha kwi-World Expo 2020
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » IJamaica "iyayishukumisela" ngeNew Innovations kwi-World Expo 2020
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlangayo ze-UAE
IJamaica "iyayishukumisela" ngeNew Innovations kwi-World Expo 2020
IJamaica kwiMboniso yeHlabathi
Ukhenketho lwaseJamaica lusetelwe ukubonisa iimveliso zalo ezintsha kunye nezinto ezintsha kwi-World Expo 2020 eDubai e-United Arab Emirates (UAE). Umxholo weJamaica Pavilion kwiWorld Expo 2020 uthi: "IJamaica iyayenza ihambise," okuthetha ukuba nokuba ngumculo okanye kukutya okanye kwezemidlalo, iJamaica iyahamba kwaye iqhagamshele umhlaba.
Abathathi-nxaxheba kwi-World Expo baya kufumana incasa yeJamaica kwibala labo elipholileyo.
Ipeyinti ibonisa inkcubeko yaseJamaica kunye nenyathelo lokuguqula nokuzisa isiqithi njengendawo yokuhambisa izinto edibanisa iMelika kwihlabathi liphela.
Kwibala elinemimandla esi-7, iindwendwe ziya kuba nakho ukubona izinto, izandi kunye neencasa zeJamaica.
IJanicaica Pavilion sele ichongiwe njengeyona "ipholileyo" kwiWorld Expo 2020 eDubai.
“Bekubalulekile ukuba iJamaica imelwe kulo mboniso wehlabathi ukubonisa kwakhona inkcubeko etyebileyo yesiqithi kunye nobutyebi bendalo. Abathathi-nxaxheba kwi-World Expo bazokungcamla indawo ekuyiwa kuyo kwaye baqonde ukuba kutheni 'sisibetho sentliziyo seHlabathi,' utshilo uDonovan White, uMlawuli wezoKhenketho eJamaica.
UDonovan White, uMlawuli wezoKhenketho eJamaica
Umahluko kwiphaneli bubonisa inkcubeko ye Jameyikha kunye nephulo lokuguqula nokuzisa esi siqithi njengeziko lolungiselelo oludibanisa iMelika nehlabathi liphela. I-pavilion inemimandla esi-7, eya kuthi yenze iindwendwe zibenako ukubona izinto, izandi kunye nezinto abazithandayo eJamaica; indlela iJamaica elihamba ngayo ihlabathi; kwaye usebenze njengonxibelelwano lwamalungiselelo.
IPavilion ine studio somculo esiphilayo esikhanyisela ezinye zeemvumi zaseJamaican, amagcisa kunye nabavelisi. apho abantu banokumamela umculo waseJamaican, bazenzele uluhlu lwabo lokudlala, kwaye babambe i-vibe yesiqithi esidlamkileyo ngelixa bonwabela izitya eziyinyani nezesiko ezivela kwezinye zabapheki abakhulu baseJamaican basebenzise imixube ekhethekileyo yemifuno kunye neziqholo. Olunye uphawu olwahlukileyo sisixhobo sokuSebenzisa indlela yokufikelela kukhenketho olubonakalayo kunye nokuphononongwa IJamaica njengendawo yabakhenkethi.
Umboniso waseDubai owawucwangciselwe ukwenzeka kunyaka ophelileyo ngoku uza kuqhubeka ukusuka nge-1 ka-Okthobha ka-2021, kwaye uza kuqhubeka kude kube ngumhla wamashumi amathathu ananye ku-Matshi 31. Umsitho uye wamiswa ngenxa yokuqhambuka kwe-COVID-2022 kwihlabathi liphela. I-Expo 19 yeyokuqala ukubanjelwa eMbindi Mpuma, e-Afrika, nase-Asiya esemaZantsi kwaye ijolise ekuququzeleleni incoko yabemi behlabathi, ezisa umxholo oyintloko othi "Ukudibanisa iingqondo, ukudala ikamva." Umboniso weHlabathi kulindeleke ukuba utsale izigidi ezingama-2020 zokundwendwela kwisithuba seenyanga ezi-25.